Mitohy ny fandraràna ny fitsangatsanganana iraisampirenena any India
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Mitohy ny fandraràna ny fitsangatsanganana iraisampirenena any India
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana India • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Fandraràna ny dia iraisam-pirenena any India
Ny lalàna fandraràna iraisam-pirenena momba ny dia dia nitarina nandritra ny iray volana mahery hatramin'ny 30 Jona 2021.
Hatramin'ny fandrarana ny fivezivezena iraisampirenena, ny sidina voafetra dia navela hiditra ao India amin'ny tetika isan-karazany.
Ny iraka Vande Bharat dia nitondra teratany karana tafahitsoka avy any amin'ny toeran-tany vahiny taorian'ny nanapahan'ny coronavirus ny sisin-tany.
Ny fifanarahana momba ny fitsangatsanganana an'habakabaka dia vita sonia amin'ireo firenena 27 manerantany.
Tamin'ny voalohany, ny fandraràna iraisam-pirenena momba ny dia dia napetraka tany India ny 23 martsa 2020, rehefa nipoitra erak'izao tontolo izao ny COVID-19.
Nanomboka tamin'izay, ny sidina voafetra dia navela hiditra ao amin'ny firenena amin'ny tetik'asa isan-karazany, ao anatin'izany ny sidina Vande Bharat Mission sy ny fifanarahana bubble amin'ny dia. Ny Misiona Vande Bharat dia nanomboka nitondra indiana tafahitsoka avy tany amin'ny toeran-tany vahiny taorian'ny fampiatoana ny sidina iraisam-pirenena mahazatra. Ny governemanta India dia nanangana ny Misiona, heverina ho fanatanjahan-tena lehibe indrindra manerantany.
Ny Direction général de la aviation civile (DGCA), ny rafi-pitantanana ny fiaramanidina sivily eto amin'ny firenena, dia namoaka fanambarana androany zoma 28 mey 2021 fa ny sidina entana sy ireo manana alalana manokana dia avela hiasa fa serivisy ara-barotra voaomana ara-dalàna mbola hiato hatrany hatramin'ny faran'ny volana manaraka amin'ny volana Jona.
Olumoko nilatsaka ho fidiana ho filohan'ny federasionan'ny fizahantany ao ...
Hawaiian Airlines namerina ny sidina nankany Tahiti